मालपोत कार्यालय दमकका कर्मचारीको कमाउ धन्दा , राजस्व भन्दा धेरै रकम मागेपछि सेवाग्राहीको आक्रोस – सप्तरंगी एफ एम
Home / ट्रेन्डिङ्ग / मालपोत कार्यालय दमकका कर्मचारीको कमाउ धन्दा , राजस्व भन्दा धेरै रकम मागेपछि सेवाग्राहीको आक्रोस
मालपोत कार्यालय दमकका कर्मचारीको कमाउ धन्दा , राजस्व भन्दा धेरै रकम मागेपछि सेवाग्राहीको आक्रोस
सप्तरङ्गी एफ.एम./असार १० दमक/डिकेश लामा/
आफ्नो भोग क्षेत्रमा नहर बढी निस्केको जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले कर भन्दा धेरै रकम माग गर्ने गरेको भन्दै सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन् । लामो समय देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरपटको नापीबाट धेरै निस्कीएपछि पास गर्न खोज्दा राजश्व लाग्ने भन्दा धेरै रकम माग गरेको भन्दै सेवाग्राहीले आज मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीसमक्ष गुनासो पोखेका छन् ।
विक्रम सम्बत् २०५९ सालमा सरपट भएको गौरादह नगर पालिका वडा नं. ३ चामबाढीको जग्गामा नहर बढी देखिएको जग्गालाई रष्ट्रिेसन गर्न खोज्दा कर्मचारीले धेरै रकम मागेपछि त्यस्तै समस्या भोग्ने अन्य सेवाग्राहीहरुले कार्यालय प्रमुख समक्ष गुनासो पोखेका हुन् । मोरङ्गको वेलबारी नगरपालिका वडा नं. ३ भाउनेका स्थायी बासिन्दा बुद्धिमान तामाङले २ बर्ष अघि देखि सवै प्रकृया पुरा गर्दा समेत जग्गा पास गर्दा लाग्ने रकम भन्दा धेरै रकम माग गरिएकोले जग्गा पास गर्न नसकेको बताउनु भयो । मालपोतका एक कर्मचारीले ५ हजार कर लाग्ने ठाऊँमा १ लाख ४० हजार रकम माग गरेको तामाङले आरोप लगाउनु भएको छ ।
तामाङले २ दिन अघि अख्तियार दुरुपयोग आयोग इटहरीमा उजुरी गरे पछि आज त्यस्ता समस्यामा परेका सेवाग्राहीको एक समूहले कार्यालय प्रमुख समक्ष गुनासो राखेका हुन् । कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भने आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताउनु भयो । कुनै कर्मचारीले त्यसरी रकम माग गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जानकारी गरे अनियमितता रोक्न सहज हुने प्रमुख भण्डारीले बताउनु भयो । भण्डभारीका अनुसार आवश्यक कागजात नपुगी तामाङले बढी रकम कर्मचारीले माग गरेको भन्ने विना प्रमाणको आरोप लगाएको बताउनु भयो । गुनासो राख्न तामाङ सहित टेकबहादुर बुढाथोकी, चिरञ्जीवि अधिकारी, धनबहादुर पौडेल लगायतका टोली मालपोत कार्यालय पुगेका थिए ।
नहरबढी जग्गाको पास गर्दा प्रचलित सरकारी दर भाऊ अनुसार गाऊँ पालिकामा २ र नगरपालिकामा ४ प्रतिशत कर लाग्ने मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत डिल्लि कोइरालाले बताउनु भयो ।
Previous: दमकका लक्ष्मिप्रसाद काफ्ले पतञ्जली योग समिति प्रदेश नम्बर १ को महामन्त्री चयन
Next: झापामा ५ स्थानीय तह बाढीको उच्च जोखिममा ,गएको २ बर्षमा २८ जनाको ज्यान गयो ५ जना बेपत्ता